'मल-डिपार्टमेन्ट स्टोर राम्रो स्किमले चल्ने हो'
Wednesday, 09 May 2012 23:43	नागरिक
निशान्त श्रेष्ठ, राजधानीको सुन्धारास्थित सिभिल मलको बजारीकरणमा स्थापनादेखि नै लागेका छन्। उनी सिभिल मलका बजार तथा सञ्चार प्रमुख हुन्। मल वा डिपार्टमेन्ट स्टोर रहने ठाउँ अथवा सामानको भाउभन्दा ग्राहक आकर्षित गर्न उनी र उनको 'टिम' ले सधैं नयाँ-नयाँ 'स्किम' ल्याउने गरेको छ, जसले सिभिललाई स्थापनाको डेढ वर्षमै सफलताको शिखरमा पुर्‍याएको छ। सिभिलको वार्षिक औसत ग्राहक आगमन दर दैनिक १० हजार पुग्नुलाई श्रेष्ठ आफ्नो टिमको सफलता मान्छन्। सिभिललाई कसरी सधैं ग्राहकको मनमा पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर ग्राहकको सामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति, सामान, मूल्य लगायतलाई आधार गरेर उनको टिमले महिनाको एउटा अध्ययन गर्ने गर्छ। उनी अभिभा क्रिएसन र एभिड इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सर्भिसेस नामका आफ्नै कम्पनी पनि चलाइरहेका छन्। व्यवस्थापन क्षेत्र तथा 'मल संस्कृति' विकासमा झन्डै एक दशकदेखि लागिरहेका श्रेष्ठसँग नागरिकका सुशील भट्टराईले गरेको कुराकानी :
तपाईंले हासिल गरेको अनुभव बताइदिनुहोस् !
सिभिल मल आउनुअघि काठमाडौं मलका प्रमुख इभेन्ट, युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको सुरुका कार्यक्रम, सिटी सेन्टर र पिपल्स प्लाजाको फुड कोर्ट र इटहरीको गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरको फुड कोर्ट सञ्चालनमा ल्याएँ भने ठमेलका फ्याक्ट्री, यिङयाङ र थर्ड आई रेस्टुरेन्टको व्यवस्थापनमा नयाँपन दिएँ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका विभिन्न परियोजनामा काम गरेंँ। ठमेल पर्यटन परिषदमा बसेर सडक महोत्सव र सुरक्षा योजना बनाएँ। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) मा ल्होसार तथा सगरमाथा दिवस, नेपाल पर्यटन बोर्डको 'सेन्ड होम अ फ्रेन्ड' र नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मा पनि काम गरेँ। मेरो यही अनुभवले नै मलाई अहिले सिभिल मल ल्याइपुर्‍याएको हो।
तपाईंको अनुभवका आधारमा मल वा डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई कसरी चलाउन सकिन्छ?
हाम्रो देशका धेरै परियोजना थोरै योजनामा सुरु हुने गरेको मैले भेटेको छु। सञ्चालन र बजारीकरणमा खर्चै नगरी भवन निर्माणमा मात्रै खर्च सक्ने प्रवृत्ति लगानीकर्तामा देखेको छु। बजारीकरणमा सकेसम्म खर्च गर्नुपर्छ, जसले ग्राहकलाई सधैं आकर्षित गरिरहन्छ। नेपालमा काम बिग्रेपछि मात्र परामर्शदाता राख्ने चलन छ। तर, हाम्रो भनाइ के हो भने कम्पनी स्थापनाको योजना बनेदेखि नै विज्ञ वा परामर्शदाता राख्नुपर्छ। दुई वर्षयता भने विज्ञ वा परामर्शदाता राख्ने चलन बढेको छ।
सिभिल मल कत्तिको चलेको छ?
सिभिल मल मेरो हिसाबमा राम्रै चलेको छ। सिभिल मल व्यवस्थापनले मलाई असाध्यै प्रोत्साहन र सहयोग गरेको छ। व्यवस्थापनको भिजन पनि छ। हामी त्यहीअनुसार योजना बनाएर लागू गर्छौं। हालै भारतीय गायक लकी अलीको कन्सर्ट गरायौं र नयाँ स्किम र योजना ल्याउँदै छौं।
सिभिल मलको प्रतिस्पर्धी छन्?
हाम्रो प्रतिस्पर्धी त छेउकै न्युरोड बजार हो जस्तो लाग्छ। यदि हामीले न्युरोडमा किनमेल गर्न जाने ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सक्यौं भने त्यो नै हाम्रो ठूलो सफलता हुनेछ।
सिभिलमा पसल राख्नेको प्रतिक्रिया कस्तो छ?
हाम्रो मलको क्षमता १ सय ७५ स्टोर भए पनि अहिले १ सय ३० वटा सञ्चालनमा छन्। अधिकांश पसलधनीको भनाइ राम्रो व्यापार भएको भन्ने नै छ। यसबाट व्यवस्थापनमात्र होइन, हामी पनि केही त पक्कै गरिएछ भनेर थप हौसिएका छौं। हामीले अझै १५ हजार वर्गफिट ठाउँ खालि राखेका छौं। यसमा सर्टिङ, सुटिङ, सारी, गरगहनाका स्टोर राख्ने योजना छ। राम्रा व्यापारी खोजिरहेका छौं।
सिभिल मल किन आउने ?
यहाँ आउने पहिलो कारण हामीसँग राम्रा गुणस्तरीय सामान साथै मनोरञ्जनका धेरै माध्यम छन् भने कुनै न कुनै स्किम चलिरहेको हुन्छ। सामानको भाउ सबै मलमा उस्तै हो, तर हामीले ग्राहकलाई मूल्यको सन्तुष्टि दिन सकेका छौं जस्तो लाग्छ। हाम्रोमा १ हजार ३ सय रुपैयाँको ज्याकेट किनेका एकजना ग्राहकले साढे १८ लाख पर्ने कार पुरस्कार पाए। यस्ता योजनाले ग्राहक थप आकर्षित भएको अनुभव संगालेका छौं। हामीले कुनै जादु गरेको होइन, भएकै कुरालाई व्यवस्थितमात्र गरेका हौं। हामी अरूको भन्दा पैसाको मूल्य बढी दिन सफल भएका छौं जस्तो लाग्छ।
आफ्नो ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्नमात्र सिभिल मलमा पसल राखिन्छ भन्छन् नि!
यो विल्कुल गलत हो। सिभिल मल सोकेस हुने ठाउँ होइन, विशुद्ध व्यापार गर्ने ठाउँ हो। सबै पसलधनी हामीसँग खुश्ाी छन्। सञ्चालनमा आएको डेढ वर्षमै सिभिल मल भनेपछि अहिले धेरैले चिनिसकेका छन्। हामी प्रत्येक महिना एउटा अध्ययन गर्छौं, जसले ग्राहकको सामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति, सामानका प्रकार, भाउ लगायतका विषय समेट्छ। हामीले सही समयमा सही व्यक्तिलाई सही सामानको सही सूचना सही योजना लगाएर सही स्रोतबाट दिन सकेका छौं। यसलाई नै मार्केटिङ भनिन्छ। सिभिलमा अहिले गल्फ पनि खेल्न पाइन्छ। सँगसँगै किनमेल पनि गर्न मिल्यो। बालबालिकालाई 'बाल संसार' छ भने थप मनोरञ्जनका लागि तीनवटा फिल्म हल छन्।
सिभिल मलका नयाँ कार्यक्रम के छन्?
हामी नयाँ स्किम ल्याउँदै छौं। यो मेदेखि आगामी अगस्टमा एउटा र त्यसपछि अक्टोबर (दसैं) का लागि अर्को स्किम ल्याउँछौं। यसबाट थप ग्राहक आउने विश्वास छ।